Impilo kunye namayeza | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: impilo kunye neyeza
Iindlela zesintu zokwandisa amandla
ezaposwa ngomhla 18.09.2021 18.09.2021
Ngenxa yoxinzelelo, i-ecology ephosakeleyo, ukungondleki-amadoda amaninzi ahlupheka kukuwohloka kwamandla. Oku kuyalungiswa, kwaye ngaphandle kwekhemistri, kodwa ngamayeza amdala alungileyo.
Uthintelo kunye nonyango lweprostatitis
Ngelishwa, ngoku ngoku ngakumbi nangakumbi amadoda aphethwe yi-prostatitis, ekhokelela ekuwohlokeni ngokubanzi kwintlalontle, uxinzelelo kunye nehlazo kusapho. Masiqonde ngokufutshane ngonobangela, oonobangela, uthintelo kunye nonyango lweprostatitis.
Ukutya ekhaya kwesifo sepancreatic
Emva konyango ngamayeza, kufanelekile ukulandela ukutya, zikwabalulekile kuthintelo lwezifo zepancreatic.
ezaposwa ngomhla 08.08.2021 08.08.2021
Ukuqaqanjelwa ngamazinyo okuqala ekuseni kude kube sebusuku, uloyiko lokuya kugqirha wamazinyo. Wonke umntu ukhe wadibana nale - pulpitis, yintoni na? Inyangwa njani? Masiyiqhelanise kunye!
Into ekufuneka uyazi ngamathumbu kunye neengxaki ezinxulumene noko
Ayonto ilandelayo ibizwa ngokuba yingqondo yesibini yomzimba, amathumbu awachaphazeli impilo yethu yomzimba kuphela, kodwa neemvakalelo zethu ... nokunye okuninzi! Ayichaphazeli kuphela i-n
Isiriyeli esingaqhelekanga sobuhle kunye nempilo
ezaposwa ngomhla 05.08.2021 05.08.2021
Wonke umntu uyazazi izibonelelo zebuckwheat kunye nezinye iisiriyiti eziqhelekileyo kuthi, kodwa makhe sijonge ukuba ingaba ukutya okuziinkozo okungaqhelekanga kunokuba luncedo njani kwimpilo yethu kunye nobuhle!
Ukwanda kwamandla kweemveliso
Indoda nganye, amandla ayo ebaluleke kakhulu, ayisiyondlela yokonwaba kuphela, kodwa ikwayinxalenye ye-ego. Indoda yokwenene ayinakho kanye okanye kabini kwaye rhoqo. Makhe sibone indlela yokuqinisa amandla kumadoda.
Iindidi kunye nokufakwa kweebrakhwe
ezaposwa ngomhla 01.08.2021 01.08.2021
Kwihlabathi langoku, iibhrashi ziyindlela eqhelekileyo yokulungisa amazinyo. Makhe sibone indlela yokuwachola kwaye sixhobe ngokupheleleyo ngaphambi kokuba uye kugqirha wamazinyo.
Iimveliso ezisempilweni zomzimba
Yonke imihla, i-ecology iya isiba mandundu, uxinzelelo kunye nokusebenza kakhulu, konke oku kunciphisa kakhulu imveliso yemizimba yethu. Ungayiphucula njani impilo yakho? Ngokwandisa umgangatho wobomi ?! Ilula kakhulu, makhe sijonge ngakumbi.
Ungabunciphisa njani ubungozi bomhlaza ebantwaneni-Iingcebiso ezi-8 kubazali
Ubomi obupheleleyo bomntwana wakho kwixa elizayo, kuya kufuneka uqale ukhathazeke ngempilo yakhe kwasebusaneni. Ukukhula, baya kuyixabisa!
Page 1 Page 2 ... Page 959 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-77 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,350.